Dowladda Turkiga oo ogaatey halka laga soo diray lacagaha lagu maalgeliyey Cadnaan Oktaar - Halbeeg News
Dowladda Turkiga oo ogaatey halka laga soo diray lacagaha lagu maalgeliyey Cadnaan Oktaar
ANKARA (HALBEEG) – Xeer Ilaalinta Guud ee Turkiga ayaa heshay caddeymo muujinaya halka laga soo diri jirey lacagaha lagu maalgeliyo ururrada iyo hay’adaha uu maamulo wadaadka muranka badan dhaliyey ee Cadnaan Oktaar.
Oktaar oo caan ku noqday in uu dadka wacdiyo isaga oo cabsan islamarkaana hablo qaaqaawan oo tobannaan ahi agtiisa ku niikinyaaan, waa xabsiga loo taxabay bishii July ee lasoo dhaafay.
Jariidadda Sorjo ee kasoo baxda Turkiga oo soo xiganeysa ilo lagu kalsoon yahay, ayaa baahisey in dambi baareyaashu heleen caddeymo muujinaya lacag badan oo laga soo diray dalalka Kazakhstan iyo Imaaraadka Carabta.
Shirkad fadhigeedu yahay dalka Kazakhstan ayaa soo diri jirtey lacag dhan labo milyan oo doollar bil kasta, taas oo qaarkeed lasoo xawili jirey qaar kalena kaash ahaan loo keeni jirey, iyadoo lagu socodsiinayo inay kamid tahay kharashaadka ku baxa hay’adaha uu maamulo Oktaar.
Lacag kale oo caddadkeeda lagu sheegay hal milyan oo doolar ayaa iyana bil kasta kaash ahaan looga soo diri jirey dalka Imaaraadka Carabta. Baareyaasha ayaa ogaadey in saddex xilli oo kala duwan, saddex boorso lacagtaas lagu keeni jirey, boorso kastana lagu soo ridayey lacag kor u dhaafeysa $300,000.
July 11, 2018, hawlgal ballaaran oo ciidamada boolisku ka sameeyeen afar gobol oo dalka Turkiga ka tirsan, ayaa lagu soo qabtay Cadnaan Oktaar iyo 234 qof oo xertiisa ka mid ah. Hawlgalka ayaa sidoo kale lagu soo qabtay hub sharci darro ah.
Eedeymaha Oktaar iyo xertiisa loo haysto ayaa isugu jira: asaasidda iyo kamid noqoshada urur aan sharci ahayn, adeegsiga maandooriyaha, tacaddiyo jinsiga ah oo loo geystey carruur, ka ganacsiga dadka, haysashada hub aan sharciyeysnayn iyo gudbinta xogo siyaasadeed iyo kuwo militeri oo ku saabsan Turkiga, kuwaasoo si jaasuus nimo ah dalal kale loo siiyey.
Waa kuma Cadnaan Oktaar?
Cadnaan Oktaar oo sidoo kale loo yaqaan Haaruun Yaxyaa, waa qoraa iyo wadaad Turkish ah. Sannadkii 1956 ayuu ku dhashay magaalo madaxda dalka Turkiga ee Ankara, halkaasoo uu kusoo qaatay waxbarashadiisa asaasiga ah ilaa dugsiga sare. Oktaar isagoo yar ayuu xifdiyey qaybo kamid ah Qur’aanka wuxuu sidoo kale wax ka bartay fiqiga Xanafiga.
Sannadkii 1979 ayuu usoo wareegey magaalada Istanbul kuna biiray Jaamacadda Culuumta Dhismaha ee Sinaan, halkaasoo uu ka bartay farshaxannimada iyo fanka suuban (Fine Arts). Markaas kaddib waxa uu ku biiray Jaamacadda Istanbul isagoo daraasad ku sameeyey falsafadda maaddiga ah iyo aragtiyaha ku xeeran. Intii uu waxbarashada jaamacadeed ku jirey wuxuu qoray dhowr buug, isaga oo markii uu waxbarasahda jaamacadeed dhammeystey kaddib asaasay hay’ad lagu magacaabo Hay’adda Cilmi Baarista ee Turkiga. Oktaar waxa uu wax ka qoray mawaadiic badan,waxaana ugu muhiimsan:
Raddinta Aragtida Unkanka Nolosha: Wuxuu aad uga hadlaa si xoogganna u raddiyaa aragtida unkanka iyo horumarka noolaha (aragtida saynisyahanka Charles Robert Darwin ee oranaysa nooleyaashu way horu maraan, oo waxay u dhallan rogan karaan nooleyaal kale, sida in bini aadamku markii hore ahaayeen noole muuqaal ahaan iyo maskax ahaanba u dhow bahda daayeerka ee waaweyn sida Goriilaha iyo Shambaansiga, balse malaayiin sano oo horumar ah kaddib isu beddelay bini aadamka maanta dunida ku nool).
Cadnaan ayaa qoray buug 768 bog ka kooban oo aragtidaas uu ku raddinayo, buugga oo cinwaankiisu yahay Atlas of Creation (Shaxda Abuurista Khalqiga) waxaa lagu turjumay dhowr luqadood, haseyeeshee buuggaas ayaan yeelannin saameyn xooggan, maadaama ay naqdiyeen culimaa’uddiin isugu jira muslimiin iyo kuwo diimo kale haysta, qaar kamid ah saynisyahannada ku xeel dheer cilmiga nooluhuna ay “malo awaal” ku tilmaameen. Mawaadiicda kale ee Cadnaan Oktaar wax ka allifey waxaa kamid ah ilxaadka, sahyuuniyadda iyo maasuuniyadda.
Goorma ayuu soo shaac baxay Cadnaan Oktaar?
Sannadkii 1980, Oktaar oo markaas arday ka ahaa Jaamacadda Istanbul kuliyaddeeda falsafadda ayaa asaasay urur diimeed, kuna dhawaaqay kacdoon Islaami ah, kaddib markii uu kasbaday taageerayaal badan oo la dhacsanaa afkaartii uu kusoo bandhigay buug uu isla waayadaas ka qoray faragelin uu sheegay in maamulka Israel ku hayo hay’adaha dowliga ah ee Turkiga iyo guud ahaan dhaqanka iyo diinta dadka Turkishka.
Dowladda Turkiga ayaa xilligaas xabsiga dhigtay Cadnaan iyo qaar kamid ah xertiisa, waxaana isaga lagu xukumay 19 bilood xarig ah. Muddada xukunka toban bilood oo kamid ah wuxuu ku qaatay xarun lagu daaweeyo dadka dhimirka ka xanuunsan, kaddib markii laga helay nooc kamid ah xanuunnada waallida ee loo yaqaan schizophrenia, kaas oo bukaannada qabaa u fekeraan si waaqica ka baxsan amase arkaan codad iyo hummaagyo malo awaal ah oon jirin.
Sannadkii 1991 ayaa mar kale xabsiga loo taxaabay Oktaar, kadib markii baaritaan laga qaaday dhiiggiisa lagu ogaadey in xaddi badan oo maandooriyaha kookaayiinta ahi uu ku jiro dhiggiisa. Muddo badan masii xirnayn, oo waa layska sii daayey, maadaama uu iska fogeeyey eedeymaha loo haysto, kuna eedeeyey Dowladda Turkiga inay cabburin ku hayso kana hortaagan tahay fidinta fikirkiisa diiniga ah.
Ninkan ayaa aad ugu ololeeya in aan la isku khaldin Islaamka saxda ah iyo xagjirnimada, wuxuu sidoo kale mar kasta ku celceliyaa in diinta Islaamku tahay diin nabdeed, diin aan oggoleyn in dadka la cabburiyo oo dhiiri gelineysa wada noolaanshaha, wada hadalka iyo xoriyadda fikirka iyo midda hadalka labdaba.
Taageerayaasha Oktaar ayaa u badan dad Hodon ah, iyagoo si joogta ah dhaqaale ugu taageero hawlaha uu ninkani wado.
Dhaqammada la yaabka leh!
Dhaqammada Cadnaan Oktaar ayaa ah kuwo layaab badan, maadaama isaga oo u ololeynaya muujinta dhaqanka fiican ee Islaamka uu haddana ku kacayo falal Islaamku xarrimay, kuwaas oo tafsiir xun ka bixinaya dhaqanka Islaamka iyo tilmaamaha wadaadka Muslimka ah labadaba.
Dhaqamada ninkan waxaa kamid ah in uu dadka wacdiyo isaga oo cabsan islamarkaana gabdho badan oo qaaqaawani ay agtiis ku niikinayaan. Gabdhaha oo dhammaantood lagu sameeyey qalliimmo jir qurxin ah sida dibnaha, horaaddada iyo qaybo kale oo jirkooda kamid ah, wuxuu ugu yeeraa magaca ‘bisadaha’.
Mar la weydiiyey cawrada dumarka, wuxuu sheegay in gabadha jirkeedu cawro ahayn marka laga reebo labo meel, gumaarka iyo horaaddada! Khamrada ayuu sidoo kale banneeyey cabisteeda isagoo tilmaamay inay tahay cabitaan ruuxi ah.
Ninkan oon wax takhasus ah ka haysan culuumta la xiriirta diinta Islaamka, waxaa horay culimada diinta ee Turkigu ugu eedeeyeen in marka uu u baahdo daliil sharci ah, ay jiraan dad u qaabilsan luqadda carabiga iyo arrimaha diinta, kuwaasoo jawaabaha uu doonayo siiya, maadaama isagu awoodin xataa in uu axaadiista iyo qur’aanka famo.
Sannadkii 2011, waxaa hawada soo galay kanaalka A9, kaasoo isagu leeyahay, lagana baahin jirey khudbadihiisa iyo muxaadarooyinkiisa isagoo hadba mowduuc kusoo qaadan jirey.
Bishii February ee sanakdii 2017, Golaha Faafreebka Raadiyowga iyo Idaacadda Turkiga ayaa soo saaray go’aan ay ku joojinayaan baahinta barnaamijyada Oktaar, isla xilligaas waxaa ganaax lacageed la dul dhigay kannaalka A9.
Shan dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay Marka
Soomaaliya oo heshiis la gashay shirkad Maraykan ah oo qaabilsan ka talo bixinta xiriirrada